ကွင်းခတ် ၁.၁ အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ဘာအသစ်လဲ | Linux မှ
သင်မှတ်မိပါသလား ကွင်း? FromLinux ၌တည်၏ ကျနော်တို့အများအပြားဆောင်းပါးများကိုအပ်နှံ ဒီစာသားအယ်ဒီတာရန် open source ဖြစ်ပြီး Adobe နှင့်၎င်း၏ Community မှ powered ။ ၎င်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ တိုးတက်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များစွာဖြင့်ဗားရှင်း 1.1 သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၎င်းတို့အချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်၊ သို့သော် ဦး စွာ၊ ကွင်း ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခု
2 ကွင်းခတ်ရှိ element များ၊ အရောင်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ
4 Extensions များ၊ ကွင်းများအတွင်းရှိများစွာသော extension များ
Brackets ၏စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် Online Editing ဟုခေါ်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှိပြီးသား HTML tag ၏ CSS ဂုဏ်သတ္တိများကိုတည်းဖြတ်ခြင်း (သို့) ဖိုင်ကိုယ်တိုင်မှအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းပါဝင်သည်။ .html styleheet ဖိုင်ကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲ။ cursor ကိုသက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်ပေါ်တွင်ကပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ Ctrl + + E.
ကွင်းခတ်ရှိ element များ၊ အရောင်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ
Brackets ကကျွန်တော်တို့ html ကုဒ်မှာချိတ်ဆက်ထားသောပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ယခင်ပုံတွင်တွေ့ရသည့် .css ဖိုင်ရှိပစ္စည်းတစ်ခု၏အရောင်ကိုမြင်ယောင်စေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ html ဖိုင်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောပြောင်းလဲမှုများကိုသင်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည် Google က Chrome ကို စာမျက်နှာအားပြန်မတင်ဘဲအလိုအလျောက်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်နှစ်ဖိုင်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းတည်းဖြတ်ခြင်းမြင်ကွင်းကိုအလျားလိုက်နှင့်အလျားလိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Themes များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဖောင့်နှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
Extensions များ၊ ကွင်းများအတွင်းရှိများစွာသော extension များ
Brackets တွေအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အရာတစ်ခုခု (Community မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်) ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့် extension များစာရင်းတွင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့အနက်အများစုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည်။
တင့်တယ်: JS, CSS နဲ့ HTML code တွေကိုအလှဆင်ဖို့
Bootstrap3အရိုးစု: Boostrap- အဆင်သင့် html ဖန်တီးရန်။
ကွင်းခတ်နှိုင်းယှဉ်: DIFF ကိရိယာတစ်ခု။
Git ကွင်းခတ်ဖြေ - ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုက၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပရောဂျက်နဲ့ GIT repository ကိုစီမံခွင့်ပေးတယ်။ ငါအောက်ပါပုံတွင်စခရင်ရိုက်ကူးထားပါ
Brackets ဗားရှင်း ၁.၁ တွင် Extract ပါ ၀ င်သောမူကွဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးစရာရှိသည် incluye una nueva experiencia de instalación inicial y una característica que le permite colaborar con un diseñador (que use .PSD) y que utilice la nube de Adobe. သိသာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါတကယ်မပြောနိုင်ပေမယ့်တော်တော်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလိုပဲ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့အခြားနည်းလမ်းများအနက်ကွင်းခတ်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်သွားရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးသည်။ (သူက Sublime Text ကဲ့သို့မြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်) သို့သော်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တိုးချဲ့မှုများကြောင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ။ ရှေ့တန်း.
ငါပြောစရာတွေများများစားစားရှိချင်မှရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့မင်းအဲဒါကိုကြိုးစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီရင်တာပါပဲ။ ကွင်းဆက်များကို Debian / Ubuntu အတွက်စုစည်းထားသော package များနှင့်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ArchLinux အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်၎င်းကို AUR မှတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ကွင်းခတ် ၁.၁ အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ဘာအသစ်လဲ။
ဗားရှင်း ၂၂၇ မှ စတင်၍ Brace ကိုသုံးပြီးဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်များများစိုက်ပျိုးခဲ့သည်
ငါ Debian Testing ကိုစောင့်နေတယ်
vi / vim ဖြတ်လမ်းများနှင့်ရွှေ့နိုင်ပါသလား။
လက်ရှိငါဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူအယ်ဒီတာ, ငါရှာတွေ့ကတည်းကငါ့အ default အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ xD
ဒါဟာတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အယ်ဒီတာပါ၊ ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားပြီးကတည်းကကျွန်တော်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ် အချိန်တိုအတွင်းမှာ SublimeText မှ hegemony ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
Sublime စာသားဟာအကြောင်းအရာတစ်ခု၊ နှစ်ခုသင်ယူနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူ့မှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိတယ်
ငါ၎င်းကိုသုံးပြီး "Ctrl + E" ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာမှမပေါ်လာဘူး။ ဖိုင်တခုခုကိုငါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိုင်မရှိဘူးလို့ငါ့ကိုပြောတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Antergos (yaourt-brackets) တွင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်တပ်ဆင်မှုကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဘယ်တော့မျှမပြီးဆုံးနိုင်ပါ။ ငါအမြဲတမ်းအောက်ပါအမှားရ။
curl-dir: "run": node-linux64 "(curl-dir) လုပ်ငန်းတာဝန်
ဖိုင်များ "downloads / node-v0.10.24-linux-x64.tar.gz" ဖန်တီးထားသည်။
« create-project »လုပ်ငန်းတာဝန်
CXX (ပစ်မှတ်) ထွက် / ထုတ်ပြန်ခြင်း / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o
make: g ++: ဒီပရိုဂရမ်ကိုမတွေ့ပါ
libcef_dll_wrapper.target.mk:212: ညွှန်ကြားချက်သည်ပစ်မှတ် 'out / Release / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o' အတွက်ပျက်ကွက်သည်။
လုပ်: *** [ထွက် / ဖြန့်ချိ / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o] အမှား 127
==> အမှား - တည်ဆောက်မှု () တွင်ပျက်ကျသည်။
==> အမှား - Makepkg သည်ကွင်းများကိုမစုစည်းနိုင်ပါ။
==> bracket ကိုပြန်လည်စတင်? [y / n]
မည်သူမဆို၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သူမဆိုသိလား (သို့) ကွင်းခတ်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း
သင်မမြင်နိုင်ပါက deb မှ install လုပ်ပါ။
ငါ AUR မှငါအမြဲကွင်းခတ် -bin ကို install လုပ်ပါ
ကွင်းခတ် -bin အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါအယ်ဒီတာအမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ Kate ဆီကိုအမြဲတမ်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ CSS ကိုအွန်လိုင်းတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပုံများနှင့်အရောင်များကိုကြိုတင်ကြည့်ခြင်းကအလွန်လက်တွေ့ကျပြီးအချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားအယ်ဒီတာများတွင်ပါသောအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနီးပါးကိုကွင်းဆက်များဖြင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောကိတ်ကိုကျော်သွားရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်များထင်ပါသလား။ ငါကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရလိမ့်မည်ဟုငါသိသော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ဤအစီအစဉ်ကိုကြိုးစားရန်ငြီးငွေ့နေပြီးနောက်ဆုံးတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရလဒ်ကောင်းများပေးသောသူများထံသို့ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
KATE နှင့်တွေ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ၎င်းတွင်ကုဒ် autocompletion, label နှင့်အခြား have မရှိပါ
autocomplete မှာပုံရသည် http://kate-editor.org/about-kate/
ကောင်းပြီ၊ HTML နှင့် CSS အတွက်ငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။
elav တောင်းသောအရာကိုမလုပ်ဆောင်သော autocomplete စာရွက်စာတမ်းတစ်လျှောက်လုံးအတူတူပင်စတင်သောစကားလုံးတစ်လုံးရှိလျှင်၎င်းသည်သင့်အားအလိုအလျောက်ပြည့်စုံစေသည်။
ပထမဆုံး Dynamic Preview ကိုနှိပ်ပါ။ Google Chrome ကိုသာရနိုင်ပါတယ်။ -> ဖယ်ရှားခြင်း ...
Google Chrome နဲ့အရူးလား? သူတို့ကဒီဟာ Linux ဆိုတာမေ့နေတာလား။ Netflix၊ WhatsApp နှင့်ယခုကွင်းဆက်များ ...
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရွေးချယ်မှုသည်သင်အပြင်အဆင်အတွက်အဆင်ပြေသည် .html နှင့်အလုပ်လုပ်မှသာလျှင်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော် WordPress အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါ .php ဖိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါအသုံးမပြုတော့တော့ပေ။ 😀
ယခုနောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင် Live မြင်ကွင်းအတွက်ဘရောင်ဇာပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ပိတ်ထားသည်။ preferences ဖိုင်တွင်ဤ "liveev.multibrowser" ကိုထည့်ထားသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည် Firefox ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်တိုင်းအခါတိုင်းကျွန်ုပ်မှားယွင်းသောအမှားတစ်ခုရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် preferences ဖိုင်တွင်မှန်ကန်သော JSON ပုံစံမရှိပါ။
heckctor ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သင်အသုံးပြုနေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကဘာလဲ။ ကောင်းတယ်🙂